Ahoana ny fomba fitaterana milina fitateram-bahoaka?
Ao amin'ny tontolon'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao dia maro ireo fomba ahafahan'ny tompon'ny tranonkala manintona ny fifamoivoizana amin'ny loharanon'ny tranonkala. Tsy isalasalana fa manova zavatra isika. Tsy ny traikefa organika (fikarohana) ihany no ahafahantsika mividy, fa koa ny karama, sosialy ary ny fialan-tsiny. Ireo loharanom-pifaneraserana rehetra ireo dia afaka manatsara ny fikajiana ny tranonkalanao. Na izany aza, fitaterana tranokala malaza ny organic trafikan-tserasera (fikarohana) fa izy no tena mahay sy miova fo. Ny fifamoivoizana organika dia mitondra maherin'ny 50% amin'ny mpitsidika rehetra amin'ny loharanom-baovaon'ny Internet sy ny bilaogy e-commerce - preco oculos de sol. Izany no mahatonga ny tanjontsika voalohany indrindra hanintona mpitsidika maro kokoa hikaroka sy hanova azy ireo ho mpanjifa tsy tapaka. Mazava ho azy, mora ny mividy fifamoivoizana fa tsy mahazo tombony ara-boajanahary. Na dia izany aza dia manana fahatokisana bebe kokoa ireo tranonkala izay napetraka ao amin'ny TOP ny fikarohana organika. Ambonin'izany, ny fifamoivoizana organika dia voatokana kokoa noho ny karama ary manana fahafahana maharitra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra amin'ny fomba ahafahantsika manomboka ny fifamoivoizana amin'ny fitaovam-pitadiavana.
Inona ireo antony mahatonga ny fitohanana fiara fitateram-bahoaka?
Ny tombony lehibe indrindra azon'ireo mpampiasa aty amin'ny tranokalanao dia avy amin'ny valin'ny fikarohana biolojika. Midika izany fa ny olona rehetra izay mametraka fikarohana momba ny fikarohana Google sy ny fikarohana momba ny fikarakarana karoka dia mahazo valin'ny fikarohana biolojika. Raha toa ka mifanaraka amin'ny tanjon'ny tranonkala ny votoatin'ny tranonkala, dia azo inoana fa hiditra amin'ny tranokalanao izy ireo ary hiverina ho mpanjifanao na mpanjifa. Ny fikarohana ara-karena ihany koa dia mahasoa amin'ny fitorahana blaogy rehefa hahita dokam-barotra miorina amin'ny fangatahany ny mpiserasera. Noho izany dia mahasoa foana ny mivezivezy amin'ny fikaroka organika raha ny famokarana fidiram-bola avy amin'ny dokam-barotra sy ny programa afrikana. Ny tombony iray hafa amin'ny famokarana traikefa organika dia ny fahafahanao hampihenana ny taham-pidirana sy hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao.
Ireo teknikam-pahefana hampitombo ny fifamoivoizana findramam-bola
Hiresaka momba ny teknikam-pambolena ilaina ahafahanao manatsara ny fialan-tsasatra ao amin'ny tranonkalanao, manangona tsindrio fitsangatsanganana, ary hahazoana serivisy misimisy kokoa.
SEO dia soso-kevitra amin'ny teknika fanavaozana ny tanjona voalohany amin'ny fanatsarana ny tranonkala arakaraka ny fenitry ny fikarohana. Raha mitady mozika toy ny Google ny mombamomba ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny tranonkala iray manokana dia tokony hanao araka izay tratranao ianao mba hamoronana tranonkala iray mora sy mora kokoa. Ankoatra izany, ny tranokalanao dia tokony hifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpampiasa. Misy karazany roa ny SEO - ivelan'ny pejy sy ny pejy. Ny pejy ao amin'ny pejy dia afaka manoro tanteraka anao sy ireo manam-pahaizana SEO anao. Izy ireo dia ahitana ny fanoratam-baovao, ny fikarohana lalindalina, ny fanavaozana rafitra rohy ary ny fampivoarana ny tranonkala. Ny pejy SEO tsy mametraka loharanom-baovao eo imason'ny milina fikarohana. Mila mamorona fanentanana fananganana rindrambaiko ianao mba hanatsarana ny lozam-pifaneraserana ao amin'ny tranokalam-pifaneraserana ary hahatonga anao ho hita ao amin'ny SERP ny loharanon'ny Internet. Ankoatr'izay, mila mampahafantatra ny tranonkalanao fa mety hitadiavana botsiho mba hahazoana traikefa maotera hafa. Raha mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ianao dia afaka mampiasa ny fitaovana Google Analytics sy ny Semalt Web Analyzer.
Content marketing dia ny tsara indrindra sy ny fomba tsotra indrindra hahatongavana any. Ny fanalahidin'ny fahombiazana amin'ny famoronana votoaty goavana dia ny hamoronana votoaty ho an'ireo mpampiasa, fa tsy amin'ny fitaovana fitadiavana. Ny votoatin'ny tranonkala dia tokony hifanaraka amin'izay mety hitrangan'ny mpanjifanao. Ilainao ny hanomezanao mpampiasa mpampiasa hevitra momba ny lohahevitra tiany hampiroborobo ny lazanao sy ny fidirany amin'ny marikao. Ataovy azo antoka fa ny votoatiny dia miavaka, manan-danja ary farany. Ankoatra izany, mametraha fehezanteny manan-danja ao aminy, indrindra amin'ny anaram-boninahitra mba hijerena mora foana ny fikarohana fikarohana.